Real Madrid oo bar-tilmaameed ka dhiganeysa saddex macalin midkood, si ay kaga dhigato badalka Solari – Gool FM
Real Madrid oo bar-tilmaameed ka dhiganeysa saddex macalin midkood, si ay kaga dhigato badalka Solari
Dajiye March 4, 2019
Wrgeysyada kasoo baxa gudaha Spain ayaa waxay shaaca ka qaadeen in Real Madrid ay go’aamisay liiska macalimiinta ay dooneyso inay ka xulato kan ay badalka kaga dhigan doonto tababaraha reer Argantina ee Santiago Solari oo halis ugu jira in shaqada lag ceyriyo.
Solari ayaa u saxiixay kooxda Real Madrid heshiis gaaraya ilaa iyo 2021 laakiin waxaa la rajeynayaa in la kansalo heshiiskiisa dhamaadka xili ciyaareedka, kadib markii ay Barcelona ka reebay tartanka Copa del Rey iyo sidoo kale guuldarada kulankii El Clásico ee horyaalka.
Macalinka reer Argantina ee Santiago Solari ayaa hatan fursada kaliya uu ku heysto kooxda Real Madrid ah tartanka UEFA Champions League.
Saxaafada Spain ayaa sheegay in madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez, uu doorbidayo midkood magacyada saddex maclin si kooxda uu u leyliyo xili ciyaareedka soo socda.
Laakiisn sheekada xiisaha badan ayaa ah in liiska saddexdan macalin uusan ku soo bixin macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, kaasoo xiliyadii lasoo dhaafay lala xiriirinayay dib ugu laabashad garoonka Santiago Bernabéu.
Yeelkadeed, liika saddexada macalin uu doorbidayo madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez in midkood uu noqdo xili ciyaareedka xiga badalka Santiago Solari ayaa kala ah Joachim Löw, Massimiliano Allegri iyo Mauricio Pochettino.
Liiska Xiddigaha ugu Goysmada badan Yurub xilli ciyaareedkan oo la soo saaray...(Ronaldo oo xitaa laga waayay 50-ka sare)
"Dhabtii waa Fool Xun tahay, War adigana ha ooyin.".- Sheeko aadan ogeyn oo ka dhacday kulankii El Clasico...+SAWIRRO